मिशन र मूल्यहरु KarmanHealthcare.com
मिशन - उत्कृष्टता को माध्यम बाट गतिशीलता
कर्मान® विकास, डिजाइन, निर्माण र म्यानुअल को वितरण मा एक विश्व नेता हो व्हीलचेयर, शक्ति खडा व्हीलचेयर, अन्तरिक्ष मा झुकाव व्हीलचेयर र सबै व्हीलचेयर तपाइँको हरेक को लागी सम्बन्धित उत्पादनहरु गतिशीलता आवश्यकताहरु। Karman संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ताइवान, र थाईल्याण्ड मा हाम्रो आफ्नै सुविधाहरु मा उत्पादनहरु बनाउँछ। हाम्रो प्रमुख उत्पादनहरु, Karman अन्तर्गत बजार® र कर्मा® स्वामित्व ब्रान्डहरु, २२ भन्दा बढी देशहरुमा होमकेयर मेडिकल उत्पादन डीलर वा वितरक को एक नेटवर्क को माध्यम बाट बेचिन्छ। कर्मन को मुख्यालय उत्तरी अमेरिका मा उद्योग को शहर, क्यालिफोर्निया मा छ।
Karman अभिनव, उच्च प्रदान गरेर जनताको जीवन सुधार गर्न प्रतिबद्ध छगुणस्तर गतिशीलता उत्पादन र सेवाहरु कि ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई पार। हामी समान रूपमा वातावरण को सम्मान गर्न र सबै नियामक दायित्वहरु संग पालन गर्न प्रतिबद्ध छौं। टेक्नोलोजी, टीम वर्क, र ग्राहक केन्द्रित मानिसहरु र प्रक्रियाहरु को माध्यम बाट लगातार सुधार यी प्रतिबद्धताहरु को लागी आधार हो।
Ergonomic व्हीलचेयर ब्रोशर
हाम्रो ग्राहक पहिले आउँछ!
हामी पूरा गर्न र दुबै आन्तरिक र बाह्य हाम्रा ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई पार गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी एक शीघ्र र हाम्रा ग्राहक को आवश्यकताहरु को सबै को लागी पेशेवर प्रतिक्रिया को माध्यम बाट विश्वास मा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं।
टीमवर्क हाम्रो व्यापार को एक महत्वपूर्ण भाग हो!
सहयोग र संचार को माध्यम बाट बढावा हाम्रो व्यापार उद्देश्यहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी। हामी नेतृत्व को माध्यम बाट परिणामहरु लाई सुधार गर्न को लागी एक सकारात्मक र सक्रिय टीम लाई बढावा दिन्छौं। हाम्रो आन्तरिक ग्राहकहरु लाई विचार गर्नुहोस् र समर्थन, मार्गदर्शन, प्रेरणा र रचनात्मक प्रतिक्रिया जहाँ आवश्यक छ।
जिम्मेवारी र स्वामित्व लिनुहोस्!
दृढ संकल्प र पहल प्रदर्शन र Karman को लागी थप मूल्य प्रदान गर्नुहोस्। सम्झौताहरु मा राख्नुहोस् र एक समय मा ढंगले रिपोर्ट खोज को लागी समाधान खोज्न को लागी। संलग्न हुनुहोस् र परिणाम साबित गर्नुहोस्। एक विस्तृत उन्मुख कम्पनी।
लगातार सुधार गर्न कोसिस!
Karman र यसको सम्बद्धहरु लगातार हाम्रो व्यापार को पुन: परिभाषित र अभिनव र प्रभावी उत्पादनहरु, प्रक्रियाहरु र समाधान प्रदान गर्न मा सक्रिय छन्। हामी हाम्रा एसोसिएट्स लाई सबै नयाँ विचारहरु को लागी खुल्ला हुन को लागी प्रोत्साहित गर्दछौं जसले हाम्रो व्यापार र हाम्रा ग्राहकहरु को जीवन लाई सुधार गर्न सक्छ।
हाम्रो प्रतिबद्धता "को माध्यम बाट उत्कृष्टता प्राप्त गरेर जनताको जीवन सुधार गर्न को लागी हो गतिशीलता"!
हामी प्रत्येक दिन हामी दुबै व्यक्ति र एक कम्पनी को रूप मा गर्छौं असाधारण परिणाम प्रदर्शन गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी उच्चतम स्तर को लागी प्रतिबद्ध छौं गुणस्तर र यो दुबै हाम्रा उत्पादनहरु र सेवाहरु मा देखाइएको छ।